वार्ता गर्न मन्त्रीहरुलाई पठाउनुस् : डा. गोविन्द केसी - Experience Best News from Nepal
वार्ता गर्न मन्त्रीहरुलाई पठाउनुस् : डा. गोविन्द केसी
प्रकाशित मिति : बुधबार, साउन २, २०७५
डा. गोविन्द केसीले कर्मचारीहरुसँग वार्ता नगर्ने बताएका छन् । उनले मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारी टोलीसँग वार्तामा सहभागी डा. केसीपक्षका वार्ता टोली सदस्यहरुले सचिवस्तरीय वार्ता टोलीसँग वार्ता नगर्ने भन्दै मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।
बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी डा. केसीले आवश्यक म्याण्डेट नै नदिई कर्मचारीमात्र सम्मिलित वार्ता टोली बनाएर झारा टार्ने काममात्र भएको आरोप लगाएका छन् । केही दिनअघिसम्म सरकारले वार्ताको लागि पहन नगरेको आरोप लगाउने केसीकाले सरकारले मन्त्रीपरिषद् बैठक अनुसार वार्ता टोली बनाउँदा पनि एकपछि अर्काे माग थप्दै जान थालेका छन् ।